जापानमा नेपालीका लागि यस्तो रोजगारी ! – Life Nepali
जापानमा नेपालीका लागि यस्तो रोजगारी !
काठमाडौ । नेपाली कामदार जापान लैजान दुई देशबिच भएको समझदारी अनुसार हाल नर्सिङ केयरगिभरका लागि परीक्षा लिइरहेको जापानले आगामी वर्ष मत्स्य व्यवसाय सहित थप क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान सुरु गर्ने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन्। नर्सिङ केयरगिभरका लागि एक हजारलाई मात्रै परीक्षामा सहभागी बनाइएपछि देखिएको नेपाली पक्षको अ’सन्तुष्टि आगामी वर्ष सम्बोधन गरिने बचन जापानी पक्षले दिएको उनीहरूको भनाइ छ।
जापानसँग नर्सिङ केयरगिभर सहित १४ वटा क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजान सकिने समझदारीमा उल्लेख छ। जापान र नेपालबिच कामदार लैजाने विषयमा भएको समझदारी अनुरूप पहिलो वर्ष नर्सिङ केयरगिभरका लागि परीक्षाहरू भइरहेका छन्। भाषा तथा सीप परीक्षा गरी दुईथरी परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरूले कामदारका रूपमा जापान जान पाउनेछन्।
उक्त परीक्षामा एक हजार जनालाई मात्रै सहभागी बनाइएको भन्दै नेपाली पक्ष अ’सन्तुष्ट देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार त्यस अस’न्तुष्टिलाई आगामी वर्ष सम्बोधन गरिने जानकारी जापानी पक्षले गराएको छ। ढकालले बीबीसी नेपालीलाई भनेस् “यस विषयलाई उठाउँदा उनीहरू ृजापाने आगामी दिनमा अन्य क्षेत्र तथा बढी सङ्ख्यामा परीक्षा लिएर नेपालमा कामदारको लागि अवसर दिने कुरामा सकारात्मक रहेको पाइयो।”
“आगामी वर्ष विभिन्न श्रेणीका लागि विभिन्न समयमा परीक्षा सञ्चालनको काम निरन्तर जारी राख्ने कुरामा जापानी पक्षले हामीलाई विश्वस्त बनाएका छन्।” हाल नेपालमा के कस्ता सीप भएका कामदारहरू छन् भन्ने बारेमा जापानी पक्षले एक संस्थामार्फत् अध्ययन समेत गराइरहेको बताइएको छ। समझदारीमा कामदार लैजाने भनिएका १३ वटा क्षेत्रहरूमा कृषि, होटेल, उद्योग, सुरक्षा, सवारीसाधन मर्मत-सम्भार, निर्माण लगायत छन्।
तर कतिलाई परीक्षामा सामेल गराउने भन्ने यकिन विवरण नआउँदा जनशक्ति उत्पादनका लागि अन्योल भइरहेको उपसचिव दीपक ढकाल बताउँछन्। “जापानमा आवश्यक पर्ने कामदारका हकमा हालसम्म कोटा उल्लेख नगरिँदा कस्तो प्रकृतिका, कति कामदार चाहिने हो भन्ने विषयमा यकिन हुन सकेको छैन।”
जापानले पाँच वर्षमा ११ देशबाट तीन लाख ५० हजार विदेशी कामदार आफ्नो देशमा भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विप्रेषणमा निकै नि’र्भर रहेको नेपालले कूटनीतिक पहल गरेर सक्दो धेरै नेपाली कामदार पठाउनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने कतिपय जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। गत वर्ष जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लिने निर्णय गरेको थियो।
विदेशी कामदारहरूलाई आफ्नो देशमा भित्र्याउने नीति जापानको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि नेपाली कामदार लाने प्रक्रिया अघि बढेको हो। जापानले लामो समयदेखि विदेशबाट दक्ष श्रमिक लिने तयारी गरिरहेको थियो। विदेशी श्रमिक प्राप्त गर्ने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई समावेश गर्न यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् चरणबद्ध छलफल भएका थिए। जापानले नेपालसँगै चीन, थाईल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेशिया, म्यानमार, कम्बोडिया र मङ्गोलिया आदि देशबाट कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको छ। -बिबिसीबाट
Previous भारतको आ’र्थिक रा’जधानी ‘मुम्बई’ म’हाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शा’सनको सि’फारिस !
Next धन कमाउन जापान पुगेको ३ महिनामा नै संसार छो’ड्नु पर्यो !